Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Dharka Dharka Daryeelka Dhaawaca Shiinaha - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Qalabka Isbitaalka > Labbiska Daryeelka Dhaawaca
Labbiska Daryeelka Dhaawaca waa shay loo isticmaalo in lagu daboolo nabar, boog, ama dhaawac kale. Noocyada dhaymada nabarrada waa:
1. Labbis aan caadi ahayn (dhar dhaqameed) waxay si qarsoodi ah u daboolaan nabarka waxayna nuugaan dheecaanka, bixinta ilaalin xaddidan. 2. Labbis isdhexgal leh. Waxaa jira qaabab kala duwan oo is dhexgalka u dhexeeya labiska iyo dusha boogta, sida nuuga dheecaanka iyo walxaha sunta ah, u oggolaanaya beddelka gaaska, sidaas darteed abuurista jawi ku habboon bogsashada; Dhismaha bannaanka ee xannibaadda, ka-hortagga duullaanka microbial ee deegaanka, ka-hortagga caabuqa is-goysyada nabarrada, iwm.
3. Labbis bioactive ah (dharka hawada laga saaray).
Way adag tahay in la sheego labiska daryeelka dhaawaca ee ugu habboon nabarka, xitaa haddii labbisku la xaqiijiyay inuu waxtar u leeyahay nabarkaas, waxaa laga yaabaa inaysan ku habboonayn dhammaan bukaannada. Sidaa darteed, waa tan ugu macquulsan in la doorto dhaymo leh midka ugu badbaadsan, ugu waxtarka badan, fudud isticmaalka iyo saamiga awoodda sare iyada oo loo marayo xulashada firfircoon ee labiska iyo codsiga la isku daray. Waxaa jira badeecooyin badan oo laga dooran karo, iyo alaabooyin cusub ayaa si joogto ah loo soo bandhigaa. Xaaladda dhaawaca waa in si sax ah loo qiimeeyaa, iyo daboolida dhaqaalaha, fudud iyo kuwa la taaban karo waa in la doortaa si kor loogu qaado bogsashada dhaawaca. Dabcan, shuruudaha labiska ugu habboon waa qaraabo. Horumarka iyo horumarka bulshada, shuruudaha dhaymada ayaa noqon doona mid sarreeya oo sarreeya.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Labbiska Daryeelka Dhaawaca oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Labbiska Daryeelka Dhaawaca soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Labbiska Daryeelka Dhaawaca la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.